Universal-qaabka iyo cabbirka waxaa loogu talagalay baabuurta, kuwa xamuulka qaada, kuwa yar yar iyo SUV-yada badankood. Waxa kaliya oo aad u baahan tahay maqas si aad u jarto dulucda sagxadda gaarigaaga. Barkinta waad gelin kartaa adiga oo aan dhabarka soo jiidin.
Universal-qaabka iyo cabbirka waxaa loogu talagalay baabuurta, kuwa xamuulka qaada, kuwa yar yar iyo SUV-yada badankood. Waxa kaliya oo aad u baahan tahay maqas si aad u jarto dulucda sagxadda gaarigaaga. Barkinta waad gelin kartaa adiga oo aan dhabarka soo jiidin. Kaliya dhex mara dunta ilaa aad ka hesho qurxinta ugu fiican!
Waxqabadka horumarsan-Qaabka polymer-ka caagga ah ayaa lagu tijaabiyay xaalado aad u daran si loo hubiyo in aysan dillaacin, dillaacin ama aysan qalloocin. 100% polymer tayo sare leh oo aan ur lahayn, cag-cagahayagu waa mid aan ur lahayn oo aan sun ahayn bisphenol A. Baabuurta looma soo bandhigi doono kiimikooyin waxyeello leh iyo ur aan fiicnayn. Xitaa marka albaabka la xiro heerkulka sare, ma jirto ur u gaar ah, markaa dhammaan rakaabku waa badbaado marka ay soo galayaan baabuurka (hawo looma baahna)!
Biyo ma galeen-Dhisme gaar ah Tiirarka toosan iyo kuwa geesaha leh ayaa si xeeladaysan loogu meeleeyaa saxaarada qotoda dheer ee sariirahaan si loo kordhiyo awoodooda dabin. Biyaha, barafka, dhoobada iyo qashinka waa la xakameeyaa mana baxsan doonaan ama kuma daadan doonaan baabuurka. Qabashada ka-hortagga-ka-caashka ayaa ku dheggan xagga hoose, sidaa darteed barkintu had iyo jeer waxay ku sii jirtaa booska - jeexdin ergonomic ayaa ku yaal xagga sare, taas oo cagahaaga siin doonta soo jiidasho iyo raaxaysi badan.
Sagxadaha sagxada caagga ah ee xilliyada oo dhan waxay ka ilaalin karaan sagxada gaarigaaga saameynta dette iyo burburka; Habka tuman ee la hagaajiyay waxa uu qaadi karaa biyaha, barafka iyo dhoobada; Kabitaanka roogga ee ka-hortagga simbiriirrada waxay ku hayn kartaa booska sagxadda sagxadda cimilo-hoosaadka eber-hoosaadka: gogosha sagxadda sagxadda waxaa loogu talagalay inay ku habboonaato baabuur kasta; Waxaa loogu talagalay in lagu hubiyo in gogosha baabuurtu aysan duugoobin, dildillaacaynin ama adaygi doonin cimilada eber ka hoosaysa: ka ilaali kursiga hore iyo kan dambe ee baabuurta wakhti dheer nadiif ah, oo lagu qalabeeyo roogag kala duwan oo culus; Ka ilaali dabaqa asalka ah cawska joogtada ah iyo wasakhda: faahfaahin kasta oo baabuurkaaga ah waa inay u ekaataa mid qumman; Fadlan hubi maraqa nadiifinta ee gudaha iyo dibadda, baabuurka dhaqida iyo bacaha wax lagu dhaqo, wakiilada ilaalinta, xumbo taayirka, muraayadaha iyo daryeelka dhalooyinka, nadiifiyaha hawada.
Hore: Baabuurka Electrostatic Film Side Block
Xiga: Daboolka Kursiga Baabuurka ee Shan-Qalab ah
Sagxadda Dabaqa qabow ee Baabuurta
Sagxada Baabuurka Quruxda badan